Vaovao - Mahasoa ve ny mpanadio rano? Fa maninona no apetrakao voalohany ny landihazo PP? Xinpaez dia mitondra anao hahatakatra ny sivana landihazo pp
Amin'ny ankamaroan'ny mpanadio rano ao an-tokantrano, ny singa sivana amin'ny dingana voalohany dia singa sivana landihazo PP. Ny singa sivana ambaratonga voalohany dia tsy misy fiantraikany mivantana amin'ny kalitaon'ny rano, fa misy akony amin'ny vokany fanivanana dingana telo na efatra ary ny ain'ny singa sivana, noho izany PP Ny kalitaon'ny singa sivana landihazo dia manan-danja manokana mpanadio rano.
1. Inona no atao hoe sivana landihazo PP? Inona avy ireo tombony?
Sombin-tsivana landihazo PP: singa polipropylene tsy misy poizina sy tsy misy fofona, singa sivana fantsom-bozaka izay maratra ary mifamatotra amin'ny alàlan'ny fanamainana, fanalefahana, fihodinana, fanamafisana ary fandraisana. Ny marina indrindra amin'ny filtration dia mety hahatratra 1 Micron. Ny firafitry ny singa sivana dia voasivana avy any ivelany mankany amin'ny sehatra anatiny. Ny akaiky kokoa ny sosona anatiny an'ny singa sivana, ny kely kokoa ny haben'ny pore ary ny marina kokoa an'ny sivana. Ny landihazo PP dia manana ny mampiavaka ny fikorianana lehibe, ny fanoherana ny harafesina, ny tsindry ambony ary ny vidiny ambany. Ampiasaina hanakanana ireo sombintsombiny lehibe toy ny harafesina, antsanga ary zavatra mihantona ao anaty rano io.
1. Ny fitoniana simika amin'ny landihazo PP dia tena tsara. Ny fitoniana simika amin'ny landihazo PP dia tena tsara. Ankoatry ny fanodikodinan'ny asidra solifara mifantoka sy ny asidra azota mifantoka dia tsy mamaly simika hafa amin'ireo mpamorona simika hafa. Noho izany dia afaka manohitra ny asidra, alkaly, solvent solika ary menaka izy io nefa tsy manahy momba ny fahalotoany faharoa.
2. Tsy misy atahorana ho voaloton'ny akora hafa mandritra ny fifamatorana ireo fotony manivana landihazo PP. Ny fampifamatorana ireo vovo-sivana landihazo PP dia tsy mitaky fampiasana fitaovana hafa. Miankina amin'ny fifamatorany manokana izany ary mifampitohy izy ireo amin'ny famolavolana ireo sivana misy habe samihafa. Ahiana ho voaloton'ny akora hafa.
3. Ny sivana landihazo PP dia tsy mitaky faneriterena famatsiana herinaratra. Mandritra ny fizotry ny fametahana tena, dia misy rafitra microporous labirinty telo refy miforona, izay manana velaran-tany lehibe sy porosity avo kokoa. Io dia mamela ny sivana landihazo PP hanana loto be dia be, ary miaraka amin'izay dia mamela ny rano handalo haingana be fa tsy mila fitaovana fampitomboana tsindry fanampiny. Midika koa izany fa ny singa sivana landihazo PP dia tsy mitaky fanamafisana herinaratra.
4. 80% ny maloto dia firafitry ny sivana maro sosona PP ao amin'ny sivana landihazo PP, ny sosona tsirairay dia afaka manakana sy mitahiry ny loto ao anaty rano. Ny kofehin'ilay sosona ivelany dia matevina kokoa, matevina kokoa ny kofehy ao anaty sosona anatiny, mihalalaka ny sosona ivelany, ary henjana kokoa ny sosona anatiny, mamorona firafitra gradient marobe. Miaraka amin'ity firafitra misy sosona marobe ity dia ho lehibe ny fahafaha-mitazona loto ary 80% amin'ireo maloto voasivan'ilay mpanadio rano dia vita ao amin'ny sivana landihazo PP.
Ireo teboka 4 etsy ambony ireo no tombony azo amin'ny sivana landihazo PP ao amin'ny mpanadio rano. Ho fanampin'izany, dia tokony homarihina fa ny androm-piainan'ny sivana landihazo PP dia matetika 3-6 volana, ary tsy maintsy soloina tsy tapaka izy io mba hiantohana ny vokatra fanadiovana rano. Ny vidin'ny landihazo PP dia ambany, ary mazàna ampiasaina amin'ny laharana voalohany izy miaraka amin'ny hafanana fanoloana somary avo mba hahatratrarana ny vokatry ny fihenan'ny vidiny.
2. Ahoana no hamantarana ny kalitaon'ny sivana landihazo PP?
Ny kalitaon'ny sivana landihazo PP dia voafaritra amin'ny fihenan'ny fibra. Ny kofehy anatiny amin'ny sivana landihazo PP avo lenta dia tery sy mitovy, ary io fahasamihafana io dia tsy ho hitan'ny maso mitanjaka amin'ny fotoana ividianany. Ahoana no tokony hanavahana antsika?
Voalohany: jereo ny lanjany. Azontsika atao ny mandanja ny lanjany amin'ny tanantsika. Arakaraky ny lanjan'ny lanjany, ny haben'ny fibre ao anaty ny sivana ary ny kalitaony no tsara kokoa.
Faharoa: jereo ny fitaovana. Rehefa misafidy singa sivana dia tsy maintsy antenaina tsara ny momba ilay singa amin'ilay sivana. Ny lokon'ny taratasy sivana mahazatra dia mitovy ary malama ny tampon'ny taratasy. Ny lokon'ny taratasy sivana amin'ny singa sivana ambany dia tsy mitovy, ary ratsy ny endriny.
Fahatelo: jereo ny famatrarana. Amin'ny ankapobeny, ny lehibe kokoa amin'ny hakitroky ny sivana amin'ny singa sivana, no tsara kokoa ny fahombiazan'ny famatrarana, ary ny kalitaon'ny singa sivana landihazo PP. Afaka mitsara amin'ny fikitihana isika. Arakaraka ny maha-mafy ny fikasihana no mahomby kokoa ny fampitana azy.
Fahefatra: mijery colloid. Ny singa sivana ara-dalàna dia manana kalitaon'ny gel tsara sy elastika tsara, raha malefaka kosa ilay faritra misy menaka ambany ary malefaka ny endriny.
3. Ahoana no hamaritana raha mila soloina ny sivana landihazo PP? Inona no tokony hojerena rehefa manolo landihazo PP?
Ny sivana landihazo PP vaovao dia fotsy. Azonao atao ny manavaka raha maloto na ratsy ny kalitaon'ny rano amin'ny ambaratongan'ny vatana mainty aorian'ny fampiasana landihazo PP.
Fanamarihana: ny singa sivana dia tsy maintsy kosehina aorian'ny fametrahana azy. Ny fotoana famolahana ankapobeny dia tokony ho 5 minitra.
Ny singa sivana landihazo PP dia an'ny singa sivana dingana voalohany amin'ny fanadiovan-drano. Arakaraky ny hanivanana ny fahalotoana no hahamora ny fanakanana ny singa sivana. Noho izany, ny ain'ny singa sivana landihazo PP dia fohy dia fohy. Ny faritra tsy dia misy rano dia mety mila soloina ao anatin'ny 3 volana. Ny faritra misy kalitaon'ny rano tsara kokoa dia tsy tokony hihoatra ny 9 volana raha ela indrindra.
Ho fanampin'izany, ny fanoloana ny singa sivana dia somary tsotra ihany, ary ireo mpampiasa Aspline manana fahaiza-miasa matanjaka dia afaka manolo azy araka ny boky torolalana, izay azo apetraka tsy misy tompony, ary afaka mitahiry vola ihany koa.